The Ab Presents Nepal » अबको ३ वर्षसम्म चम्किनेछन् यी ४ राशिको भाग्य ! कमेन्टमा “ॐ” लेखि हेर्नुहोस कतै तपाईको राशी त परेन !
अबको ३ वर्षसम्म चम्किनेछन् यी ४ राशिको भाग्य ! कमेन्टमा “ॐ” लेखि हेर्नुहोस कतै तपाईको राशी त परेन !
हिजो मध्य रातबाट सुर्यले राशी परिवर्तन गरेको छ। सुर्यले राशी परिवर्तन गर्दा कुनै राशिलाई राम्रो फाइदा हुने गर्छ भने कुनै राशिलाई बेफाइदा हुने हुन्छ। कुनै राशिलाई लाभ हुँदा छोटो समय सम्म मात्रै लाभ हुने हुन्छ भने कुनै राशिलाई लामो समय सम्म पनि लाभ कायम रहने हुन्छ। आज हुने सुर्यको राशी परिवर्तनले विभिन्न चार राशीहरुलाई ३ वर्ष सम्म लाभ दिलाउने हुन्छ।’
‘यी ४ राशीहरु सिंह, कन्या, तुला र कुम्भ रहेका छन्। आजको रातको १२ बजे देखि ३ ‘वर्ष सम्म यी ४ राशीहरुलाई राम्रो समय रहने ज्योतिष शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ। जीवनमा भएका ‘विभिन्न समस्या हाल भएर जान सक्ला। केहि समय देखि हल नभएको आर्थिक समस्या समेत हाल हुने अवस्था आउन सक्ने देखिन्छ’।
‘यी राशी हुने व्यक्तिहरुको नबनेको कार्य समेत फत्ते हुने देखिन्छ। स्वास्थ्यको मामिलामा पनि यी ४ राशी हुनेहरुको लागि सुर्यको राशी परिवर्तन शुभ हुनेवाला रहेको छ’।
‘स्वास्थ्यमा भएको सम्पूर्ण विकार हटेर जाने देखिन्छ। ‘अध्ययनमा सफलता हासिल गर्नको लागि खासै दुख गर्नु नपर्ने देखिने भएता पनि शिक्षाको क्षेत्रमा सानो-तिनो पनि लापरवाहीले दुख निम्त्याउन सक्छ। सामाजिक रुपमा प्रतिष्ठा बढ्ने योग बन्न सक्ला भने सामाजिक सम्मान पनि प्राप्त होला। तर सामाजिक क्षेत्रमा दायित्व समेत बढ्ने हुँदा कार्यबोझ भने बढेको आभास हुन सक्ला’।
‘यी ४ राशी हुनेहरुको लागि सुर्य राशी परिवर्तनले पारिवारिक शुख समेत दिलाउन सक्ने देखिन्छ।’ आर्थिक मामलामा थोरै मात्र संयमता राख्नु भएमा पनि राम्रै लाभ मिल्न सक्ला। सुर्य परिवर्तनले यी ४ राशी हुनेहरुको कुण्डलीमा रहेको नक्षत्रमा विशेष महासंयोग बन्न सहयोग गर्ने हुँदा ३ वर्षसम्म लाभ मिल्ने हुन्छ’